ओलीले बिर्सिए आफ्नै कमिटीका सदस्य, को होला त स्थायी कमिटीमा नपर्ने ? – Makalukhabar.com
ओलीले बिर्सिए आफ्नै कमिटीका सदस्य, को होला त स्थायी कमिटीमा नपर्ने ?
काठमाडौँ, जेठ ३ । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकमा केपी शर्मा ओलीले सदस्य लिस्टमा नाम नै लेख्न बिर्सिएका छन् । नेकपा एमालेको ‘अन्तिम’ स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नाम लिस्ट हेर्दै एक जना सदस्य छुटेको बताएका थिए ।
ओलीको यस्तो प्रतिक्रियाले बैठकमा सबैको मनमा प्रश्न उब्जाएको बेला ओलीले भने सजिलै भनेका छन्, मैले त हाम्रो स्थायी कमिटीमा २५ जना जस्तो लागेर २५ मा सहमति गरेँ, यहाँ त २६ जना पो रहेछौं ।
ओली र प्रचण्डबीच हिजो मात्रै एकीकृत पार्टीको ४३ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा एमालेबाट २५ र माओवादीबाट १८ जना रहने सहमति भएको थियो । त्यसलगत्तै बसेको बैठकमा पदेन सहित २६ स्थायी कमिटी सदस्य रहेको सायद ओलीले बिर्सिए ।
यस्तो अवस्थामा सबैको मनबाट को आउट भए भन्ने जिज्ञासा निम्तिनु स्वभाविक नै हो । सम्भवतः पदेन सदस्यमध्येबाट एक बाहिरिन सक्नेछन् ।
एमाले स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष र दुई बरिष्ठ नेतासहित १५ पदाधिकारी छन् । बरियताक्रम अनुसार अध्यक्ष ओली, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल पदाधिकारीकै हैसियतमा छन् । त्यस्तै उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, अष्टलक्ष्मी शाक्य,युवराज ज्ञवाली र भीम रावल छन् ।
बैठकमा कतिपयले आँकलन हालसालै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएकाले कँडेल नै परेका छन् । यद्यपि योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद राजनीतिक नियुक्ति भएकाले उनी पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग हुन नपर्ने तर्क पनि गरिँदैछ ।